Hitombo 2,5 heny ny saran'ny rosiana amin'ny fanondranana rosiana - China Foshan Hermes Steel
Hiakatra 2,5 heny ny saran'ny fanondranana rosiana any ivelany
Nampitomboin'i Russia in-2.5 ny vidin'ny fanondranana azy amin'ny vy vy. Ny fepetra ara-bola dia hanomboka amin'ny faran'ny volana janoary mandritra ny 6 volana. Na izany aza, raha jerena ny vidin'ny akora ankehitriny, ny fampiakarana ny sara dia tsy hitarika amin'ny fampitsaharana ny fanondranana any ivelany, fa amin'ny lafiny lehibe kokoa, dia hitarika fihenan'ny tombom-barotra any ivelany. Ny tahan'ny saram-pandefasana ambany indrindra dia 45 euro / taonina fa tsy 5% ankehitriny (eo amin'ny 18 euro / taonina miorina amin'ny vidin'ny tsena manerantany izao).
Raha ny fampitam-baovao hatrany, ny fiakarana sarany dia hiteraka fihenana lehibe eo amin'ny sisin'ny varotra mpanondrana, raha toa ka 1,5 heny eo ho eo ny sandan'ny mpanondrana. Mandritra izany fotoana izany, noho ny haavon'ny teny nindramina iraisampirenena, antenaina fa tsy hidina avy hatrany ny habetsaky ny vy vy alefa any amin'ny tsena ivelany aorian'ny fampiharana ny lalàna vaovao (farafaharatsiny amin'ny volana feb). “Ny olana amin'ny famatsiana ara-pitaovana dia tena matotra eo amin'ny tsenan'ny vy. Mety hiatrika tsy fahampian'ny akora manta i Torkia amin'ny volana feb. Na izany aza, heveriko fa ny fampiharana an'io sarany io, indrindra amin'ny resaka tsy fahampiana ara-materialy, dia tsy hanilika tanteraka an'i Russia amin'ny maha mpamatsy azy. Ankoatra. Hanasarotra ny varotra Tiorka izany ”, hoy ny mpivarotra tiorkaita tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny media.
Mandritra izany fotoana izany, satria ireo mpandray anjara amin'ny tsena fanondranana dia tsy manana fisalasalana momba ny fampiharana ny sara vaovao, amin'ny faran'ny taona, ny vidin'ny fividianana seranan-tsambo dia ho 25 000-26,300 rubles / taonina (338-356 dolara amerikana / taonina) Seranan-tsambo CPT, izay ahafahan'ny varotra mahasoa. , Ary mampitombo ny sarany.
Fotoana fandefasana: Jan-08-2021